Mpanamboatra sy mpamatsy prototika plastika China Mestech
Ho an'ny vokatra plastika izay mila famokarana bobongolo dia matetika isika no manao vatana prototype plastikahanamarina ny endriny. Izy io dia manondro modely miasa iray na maromaro izay natao arakaraka ny sary na ny firafitra fisehoana ivelany nefa tsy manokatra ny bobongolo mba hijerena ny fahamarinan'ny endrika na firafitra. Ny prototype plastika amin'ny toerana samihafa dia fantatra ihany koa amin'ny santionan'ny plastika, maodely, mackup.
Ny prototype plastika dia fomba iray lehibe hanombanana ny famolavolana ny vokatra sy ny fampisehoana vokatra. Izy io dia mifototra amin'ny sary famolavolana vokatra, amin'ny alàlan'ny fanodinana fitaovana milina na fanasitranana laser resin na fizarana fifamatorana mba hamokarana santionany amin'ny fanombanana ny endrika sy ny fampisehoana. Rehefa mamolavola vokatra vaovao isika dia matetika ny santionany dia natao araka ny fisehon'ny vokatra na ny firafitry ny rafitra hijerena ny endrika na firafitry ny modely miasa. Ny fanaovana prototype dia iray amin'ireo fomba mahomby indrindra hanamarinana ny famolavolana vokatra sy hampihenana ny risika famokarana.
Miaraka amin'ny tanjona hanomezana ny fomba mahomby indrindra amin'ny fanamboarana ny prototype sy ny fitaovanao, eto ireo injenieran'ny famolavolana mba hanome anao endrika ho an'ny serivisy fanamboarana mba hahazoana antoka fa ny vokatrao (s) dia mety amin'ny mpamokatra vokatra plastika foana. Amin'ny alalàn'ny fandinihana lalina sy ny fisafidianana fitaovana manokana, azonay atao ny manamafy ny fahatokisan'ny tetikasanao ary manolotra serivisy prototyping haingana hanomezana doka ny endrika- Ity dia manome fotoana betsaka hanaovana fanandramana fampiasa izay hanasongadinana ireo fanovana mety hatao amin'ny endrika hametrahana mifanaraka amin'ny takian'ny tsenao. Izany dia miantoka fa ny olana momba ny famolavolana vokatra dia tsy miditra amin'ny dingana fanarahana ny famokarana bobongolo, hialana amin'ny tsy fahombiazan'ny tara ary fandaniam-bola be. Ho an'ny vokatra indostrialy marobe, na vokatra elektronika sarotra, fitaovana elektrika, fiara, fitaovana fitsaboana, borosy nify, kaopy misy rano ary kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro tsotra, amin'ny sehatry ny famolavolana vokatra, ny santionany prototype dia tokony hatao mba hanombanana sy hanamarinana ny fahaizan'ny teknika, ny teknolojia sy ny lafiny tsena, ary manatsara hatrany ny famolavolana fanatsarana. Raiso ny vokatra tsara indrindra.
Karazana sy fampiasana prototypes plastika
1. Prototype fisehoana: Eo am-piandohan'ny dingana famolavolana vokatra vaovao, ataovy ny prototype fisehoana mba hanombanana sy hanatsarana ny endrika isehoan'ny vokatra, ary safidio ny endrika fisehoana mety sy mahasarika indrindra ho an'ny mpanjifa.
2. Prototype ara-drafitra:Rehefa vita ny famolavolana ny firafitry ny vokatra, mazàna ny prototype dia natao araka ny sary famolavolana firafitra alohan'ny famokarana bobongolo. Ny mpamorona dia manamarina ny prototype famolavolana rafitra hahitana izay lesoka amin'ny famolavolana mialoha, ary hanatsara sy hanatsara ny endriny, mba hialana amin'ny risika amin'ny famokarana.
3. Prototype mandeha ho azy: Ho setrin'ny filan'ny mpanjifa na ny filan'ny fampiroboroboana ny tsena, ny prototype dia aseho mialoha amin'ny tsena sy ny mpanjifa alohan'ny hanaovana ny bobongolo na ny bobongolo tsy vita.
Fisehoana / Prototypa struktural
Prototype an'ny firafitra
Misy teknolojia dimy lehibe hanaovana prototypes plastika toy izao
Prototypes plastika Machining CNC
1. Machining CNC:Ny prototype dia novokarin'ny ivon-toerana fanapahana. Manondro ny sary famolavolana vokatra, ny fitaovana mavesatra dia esorina amin'ny banga plastika mafy amin'ny alàlan'ny fanapahana fitaovana amin'ny milina fanapahana, ary azo zahana ireo ampahany mifanaraka amin'ny habeny sy ny endrika. Aorian'ny fanodinana CNC, ilaina matetika ny fanodinana tanana.
--- Tombony: ny ampahany dia azo atao amin'ny fitaovana isan-karazany arakaraka ny filàna; ny ampahany vita dia manana ny marina tsara, ny tanjaka ary tsy misy fanodikodinana; mora hahazoana kalitao ambonimbony kokoa, mora hosodoko, elektrôlika ary fanonta lamba. Mety amin'ny santionany miaraka amin'ny fivorian'ny fiangonana, ny faritra mihetsiketsika, ny ampahany lehibe, ny faritra misy endrika haingon-trano, ary ny milina miasa. Ny fotoana fanaterana dia 7-8 andro. Izy io dia mety amin'ny fanaovana prototypa endrika, prototype prototype ary prototype prototype.
--- Fitaovana: ABS, PC, POM, PMMA, nylon, sns.
--- Ny fatiantoka: ny fatiantoka dia ny filàna fanodinana amin'ny tanana, vidiny lafo. Arakaraky ny maha-sarotra ny firafitra no avo kokoa ny vidiny.
2. slåna Prototyping stereolithography - ny teknolojia SLA dia manamafy ny sosona tokana amin'ny alàlan'ny fizahana laser. Amin'ny alàlan'ny taratra laser ultraviolet, araky ny fizarana hazo fijaliana naseho ny sosona voalohany, ny fanasitranana isaky ny teboka, avy amin'ny teboka ka hatrany amin'ny tsipika, hatrany amin'ny tsipika ka hatrany ambonin'ny, amin'ny alàlan'ny fivezivezena amin'ny sehatra fananganana, ny fanontana telo-habe dia vita amin'ny fametahana sosona tsirairay . Ny prototype dia nesorina tao anaty tanky ary nohamafisina tao ambanin'ny jiro ultraviolet. Miankina amin'ny fahasarotana, ny daty fandefasana dia mety ho fohy 2-3 andro.
Prototypes plastika SLA
3. SLSna sinter laser voafantina. Izany dia mitaky fananganana singa avy amin'ny angona 3D mampiasa vovoka resin sy laser. Ny kilasy fampidirana simulated dia azo ampiasaina hanomezana fampisehoana vitsivitsy, ao anatin'izany ireo singa "Movable hinge". Ny daty fanaterana dia mety 2-3 andro, miankina amin'ny fahasarotana. Nandritra ny dingan'ny sinter an'ny SLS, ny hafanan'ny vovoka (na ny fatorany) dia nahatratra ny teboka miempo ary tsy afaka mikoriana tsara izy ary mameno ny banga eo anelanelan'ny vovoka. Noho izany, malalaka sy marokoroko ny tampon'ilay ampahany.
--- Tombony: tanjaka tsara, tsy mora simba, fanoherana ny fiantraikany, mahazaka lanja sy milina maromaro. Mora mifamatotra. Fanoherana ny harafesina Izy io dia mety amin'ny fanaovana prototype prototype.
--- Fitaovana: Fampiasana vovo-nylon, vovo-polycarbonate, vovo-polimeran'ny akrilika, vovoka polyethylene, vovoka nilona afangaro amin'ny vakana fitaratra 50%, vovo-polimeran'ny elastomer, volo vita amin'ny seramika na metaly ary binder ary fitaovana hafa, fampitahana ny fampisehoana.
--- Ny fatiantoka: ny tsy fahaizan'ny refy sy ny kalitaon'ny toetr'andro. Nampiasaina ho an'ny prototype prototype izay tsy ilaina ny kalitao avo lenta.
4. Prototype vacuum(Famenoana vacuum) Ny fanabeazana vacuum dia fomba fanaovana maodely batch kely. Mampiasa ny prototype tany am-boalohany (prototype CNC na prototypa SLA) hanamboarana lasitra gel silica ao anaty banga, ary mampiasa fitaovana PU handraraka ao anaty fantsona, mba hanangonana ny mitovy dika mitovy amin'ilay prototype tany am-boalohany, izay mahazaka hafanana, tanjaka ary hamafin'ny hafanana noho ny prototype voalohany. Raha mitaky andiana maromaro na am-polony ny mpanjifa dia mety ny mampiasa an'io fomba io izay mampihena be ny vidiny.. Ny fitaovana dia afaka manome fitaovana fanahafana isan-karazany hahatratrarana ny fananana sasany amin'ny ampahany manamboatra tsindrona. Ny daty fanaterana dia mety 7-10 andro, miankina amin'ny fahasarotana.
--- Tombony: Ilaina ny mampiasa ny fizotran'ny CNC na ny SLA hanamboarana santionany tany am-boalohany, izay mety amin'ny andiana maromaro ka hatramin'ny amina ampolony andiana santionany kely. Ny fahamarinan-toerana lehibe, ny tanjaka ary ny hamafiny dia avo kokoa noho ny prototype an'ny SLA, akaiky ny prototype an'ny CNC. Izy io dia mety amin'ny fanaovana prototype prototype. Prototype prototype sy prototype prototype.
--- Fitaovana: PU resin dia matetika ampiasaina, fa koa afaka manome isan-karazany ny simulation fitaovana.
--- Tombony: Tsy mety amin'ny faritra misy endrika sarotra. Ny vidiny dia ambany noho ny santionan'ny CNC.
5. Rim (Reaction Injection Molding) dia ny fampiasana ny prototype tany am-boalohany (prototype CNC na prototype SLA) vita amin'ny silika gel, ny polyurethane PU misy singa roa dia atsofoka ao anaty lasitra haingana amin'ny hafanan'ny efitrano sy ny tontolo iainana ambany, fanasitranana sy paositra -Fanodinana hahazoana ny santionany plastika takiana.
--- Tombony: Ampiasaina amin'ny famerenana andian-tariby kely amin'ny takelaka tsotra sy lehibe kokoa ary famokarana vokatra matevina rindrina matevina sy rindrina tsy mitovy fanamiana. Izy io dia manana tombony amin'ny fahombiazana avo lenta, tsingerin'ny famokarana fohy, fizotrany tsotra ary vidiny mirary .--- Fitaovana: Polyurethane PU roa singa.
--- Tombony: tokana ireo fitaovana ampiasaina.
Fitsaboana amboninà prototype: poloney, sary hosodoko, fanontana vita amin'ny landy, fanamasinana, fametahana herinaratra.
Ny fizotran'ny prototyping haingana dia afaka manolotra karazana famaranana aorian'ny lasitra sy teknika fandokoana, mba hamoronana endrika matihanina. Amin'ity dingana ity, ny injenieranay dia afaka manolotra safidy haingana ho an'ny fitaovana prototyping haingana hahatratrarana vokatra mahafinaritra sy mahavariana kokoa. Amin'ny maha-serivisy fiatoana anay dia manome serivisy serivisy ho anao izahay, toy ny famolavolana vokatra, prototyping, fanodinana bobongolo ary ny famolavolana tsindrona, ny milina ary ny fanangonana ny vokatra. Iray amin'ireo lahasa ny manome anao santionany amin'ny prototype amin'ny faritra plastika sy vy. Amin'ny tsingerim-pivoaran'ny vokatrao, miaraka amin'ny fanohananay feno, azonay antoka fa miditra amin'ny tsena amin'ny fomba miasa sy mahomby amin'ny fomba feno ny vokatrao.
Ny fanombanana ny prototype dia ampahany lehibe amin'ny famolavolana vokatra. Mestech koa dia manolotra famolavolana vokatra, fitaovana amboarina, famolavolana tsindrona plastika ary serivisy fivoriambe vokatra hanohanana bebe kokoa ny fizotry ny famokarana anao.
Previous: Fanontana 3D vy
Manaraka: Dingana fanariana maty
Fanontana Prototype plastika 3d
Prototype plastika Cnc
Fanamboarana prototype plastika
Sela plastika Prototype
Prototype Sla plastika